Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya na China Cartridge Na -ejuputa Mmepụta Line IVEN
IVEN katrij na -ejuputa ahịrị mmepụta (ahịrị mmepụta carpule) nabatara nke ukwuu maka ndị ahịa anyị ka ha mepụta cartridges/carpules nwere nkwụsị ala, ndochi, oghere mmiri (njupụta mmiri), okpu na -agbakwụnye, na -ekpuchi mgbe akpọnwụsịrị na ịgba ọgwụ mgbochi. Nchọpụta nchekwa zuru oke yana njikwa nwere ọgụgụ isi na -ekwe nkwa nrụpụta kwụsiri ike, dịka enweghị katrij/carpule, enweghị nkwụsị, enweghị ndochi, nri ihe akpaaka mgbe ọ na -agwụ.
Cartridges/carpules na-enye nri mgbe sterilization gasịrị ---- akụkụ ala kwụsịrị-zigara ya na ebe a na-emeju mmanụ-jupụta oge nke abụọ iji jupụta ma kpochapụ azịza na-enweghị isi-zigara ya na ọdụ ụgbọ elu-zigara ya na katrij/ efere nchịkọta carpules.
1. Nabata teknụzụ ọgbara ọhụrụ nke ụwa, mezie ya n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ GMP nwere usoro kọmpat.
2. Mechie nkwụsị, jupụta, na -akpaghị aka na akpaghị aka.
3. Akụkụ niile na -akpọtụrụ ọgwụ ọgwụ na -anabata 316L S/S ma ọ bụ ihe na -enweghị mgbanwe ọgwụ na ọgwụ.
4. Enwere ike ịtọ paramita moto na -arụ ọrụ n'efu dabere na olu jupụta na ọsọ na -agba ọsọ, na -akwalite nke ọma.
5. Ọ dị mfe ịgbanwe akụkụ nkọwapụta.
6. Enweghị katrij/carpule enweghị nkwụsị; enweghị katrij/carpule enweghị ndochi; enweghị katrij/carpule enweghị mkpuchi.
7. Ọrụ nchọpụta akpaaka maka nkwụsị na okpu aluminom.
8. Nchedo mmechi akpaaka mgbe imepe ụzọ.
9. Bọtịnụ nrụpụta dị.
Akara & Ihe
Ihe nkedo bọọlụ
Onye na -emebi ihe
Ọsọ agba anọ
Na -ejuputa mgbapụta
Ịgbanwe ike ọkọnọ
Akụkụ kọntaktị ngwọta
1-3 ml nke mmiri ara ehi
Ike imeputa ihe
Na -ejuputa isi
Isi na -akwụsị akwụsị
Na -ejuputa ziri ezi
Nke gara aga: Micro Production Collection tube Production Line
Osote: Usoro ọgwụgwọ Turnkey Cell
Carpule Na -ejuputa Line Production
Usoro Carpule na-ejuputa ihe na-akwụsị
Igwe na -ejuju katrij
Line nke na-ejuputa ihe na-akwụsị akwụsị
Ahịrị carpule eze
Ahịrị katriị eze
Ahịrị katrij insulin emejupụtara
Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Igwe Ampoule À Coudre Led, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Igwe eji emejuola agịga,